iOS9- iPhone သတင်းများ အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS9သတင်းများ iPhone နှင့် iPad အတွက် operating system သစ် iOS 8 ကိုအခြေပြုသောအခြေခံ မှစတင်၍ iOS9သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးသင့်လျော်သောထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုကိုခံစားနိုင်စေရန်အတွက်၎င်းသည် iPhone သို့ရောက်လာသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ၏ရိက္ခာ အသစ်နှင့်ထုတ်မထားသော features တွေ iOS9ပါတဲ့ iPhone ပေါ်မှာ။
IOS9သဟဇာတဖြစ်သော iPhone မော်ဒယ်များ
iOS9သည်အောက်ပါ iPhone မော်ဒယ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်:
iOS9ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ။
iOS9ကို WWDC 2015 တွင်တင်ဆက်ခဲ့သည် ဇွန်လတွင်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ developer များစုရုံးကြသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်အက်ပဲလ်၏မိုဘိုင်း operating system ၏တိုးတက်မှုသတင်းနှင့်တိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
La iOS9နောက်ဆုံးဗားရှင်း ၎င်းကိုစက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅၊ iPhone 9s နှင့် iPhone 2015s Plus များကိုလည်းကြေငြာမည့်လတွင် download လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို iOS6နှင့်အတူပါလာလိမ့်မည်။ ကျန်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေကို OTA ကနေတစ်ဆင့် update လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် iTunes နဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်တာတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။
IOS9သင်ခန်းစာများ
သငျသညျရှိပါက iOS9အတွက်သံသယများiPhone အတွက် Apple operating system နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာအချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင် iOS9ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
iOS9တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံရိုက်နည်း
iOS9မှာနှိုးစက်တစ်ခုထည့်နည်း
iOS9Multitasking ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
ကျွန်ုပ်၏ iPhone တွင် iOS9ဖြင့်စာလုံးအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲနိုင်ပုံ
iOS9တွင်မေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က iBoot ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်သည်မန်နေဂျာ GitHub တွင်ပေါ်လာသည်။
por ပါပလော Aparicio လွန်ခဲ့တဲ့4အနှစ် .
မင်းရဲ့ iPhone က WiFi နဲ့မချိတ်ဆက်ဘူးလား။ operating system ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်တိုင်းတိုင်းအသစ်များပေါ်လာသည်။
iOS 10.1 နှင့် iOS 10.0.2 နှင့်မြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
Apple က iOS ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းကိုထုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းသုံးစွဲသူတော်တော်များများကသူတို့တကယ်ကိုထိုက်တန်ရဲ့လားလို့တွေးမိတယ်။
10.1 မြန်နှုန်း iOS 10.0.2 နှင့် iOS 9.3.5 နှိုင်းယှဉ်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Apple သည် iOS 10.1 ၏နောက်ဆုံး version ကိုပုံတူပုံ၊ mode ကိုသုံးသည့်ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Apple က iOS 9.3.5 နှင့် 10.0.1 ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ သင်ဟာ iOS9ကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူး
အက်ပဲလ်ဟာ iOS 9.3.5 ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီး၊
iOS 10 ဟာ iOS 9.3.5 ထက်ပိုမြန်လား။
Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် iOS 10 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမနက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
IOS9အသုံးပြုမှုသည် ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာသည်
por Alejandro Cabrera လွန်ခဲ့တဲ့5အနှစ် .
iPhone, iPad နှင့် iPod Touch ထုတ်ကုန်များ၏ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် iOS 88 ကိုအသုံးပြုနေကြပြီး၎င်းသည်အချက်တစ်ချက်တိုးလာသည်။
Apple မှပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အသိပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပြသခြင်းသည် ...
BottomBar သည် status bar ကိုမျက်နှာပြင်အောက်သို့ရွှေ့သည်
Cydia တွင်ရရှိနိုင်သောအပြောင်းအလဲများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲသောအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်နိုင်သည် ...
ကာတွန်း GIF တစ်ခုကို GIFLock ဖြင့်သင်၏ iPhone lock screen ထဲသို့ထည့်ပါ
jailbreak ကပေးထားတဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း ...